Bheka Amacala Obugebengu E-Dubai Ngaphambi Kokuya e-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Bheka Amacala obugebengu eDubai Ngaphambi kokuya e-UAE
Ngabe ufunwa e-UAE
Kunezigaba ezimbili zokwahlulela e-UAE, okungukuthi ezobulungiswa bendawo kanye nokwahlulela kwezomthetho. Isakhiwo sezomthetho saleli lizwe sidingida izinkantolo ezimbili, izinkantolo zomphakathi ezisebenza ngokufana kanye nezinkantolo zaseShararia. Zonke zimboza izindawo zomthetho ezahlukahlukene.
Njalo i-Emirate inenkantolo yayo yobumbano
Ummeli omqasayo uzokwenza isheke eliphelele
Lokhu kucaciswe yi-Article 104 yomthethosisekelo ukuthi abaphathi bezomthetho kuleyo naleyo emirates bayaziphendulela kuyo yonke imicimbi yezomthetho nezindaba ezinganikezwanga noma zinikezwe enkantolo yezomthetho-sisekelo ngomthethosisekelo. Ngenxa yalokhu, zonke izindaba zokwahlulela zibuswa ngabaphathi bendawo kwisiphathimandla ngasinye, hhayi ngaphansi kweziphathimandla zenkantolo kazwelonke.
Ukuya enkantolo ezinkantolo zombuso
Isigaba 105 somthethosisekelo sivumela ukudlulisela konke noma ingxenye yanoma imiphi imithetho yezomthetho ezinkantolo zamazwe omthetho ngokomthetho wumbuso lapho kuceliwe lowo mfowethu. Amacala obugebengu, awomphakathi nawezentengiselwano avumelekile ukuthi adluliselwe ezinkantolo zokudluliswa kwamacala achazwe ngumthetho wenhlangano izinqumo zawo zokugcina.
Isibonelo, e-UAE, yonke i-Emirate inenkantolo yayo yobumbano yize iRas al Khaimah kanye neDubai benezinhlaka zabo zokwahlulela ezihlukile.
Kusho ukuthini kuwe uma ufuna ukubheka amacala obugebengu eDubai noma e-UAE?
Asikho isidingo sokuthi okweletwayo afake icala lamaphoyisa endaweni ohlala kuyo noma ngaphakathi kwe-Emirate efanayo. Ngakho-ke, uma kwenzeka ukuba ube yisakhamuzi saseDubai noma ubuvame ukuba munye futhi unethemba lokuthi ibhange noma okweletwayo wakho ufaka icala kwesinye seziteshi zamaphoyisa e-Emirate, isimanga esikhulu singakulindela ngakho-ke kungcono ukubheka icala lamaphoyisa ngaphambi kokungena ngisho nase-UAE.
Konke okudingeka ukwenze ukufaka inombolo yekhadi le-Emirates ID yakho
Manje kungenzeka ukuthi abahlali bazi futhi bahlole ku-inthanethi uma kwenzeka benecala lezezimali elibhaliswe kuphela eDubai futhi elingasebenzi kulo lonke i-Emirates. Amaphoyisa aseDubai anikeza insiza eku-inthanethi mahhala evumela abahlali be-UAE uma kunqatshelwe indawo yokuhamba ngabo ngenxa yamacala ezimali kuphela eDubai Emirate.
Landa uhlelo lokusebenza lwamaphoyisa aseDubai atholakala kuGoogle Play
Lapho usebenzisa le nsizakalo, konke okudingeka ukwenze ukufaka inombolo yekhadi le-ID yakho ye-Emirates futhi ufinyelele kunombolo yeselula ebhaliswe ngokumelene ne-ID yakho ye-Emirates. Lapho usufaka inombolo ye-UID, njengomfakisicelo, udinga ukuziqinisekisa nge-OTP ezothunyelwa kunombolo yakho yeselula. Ukuze usebenzise le nsiza, vele ungene kwiwebhusayithi esemthethweni yeDubai Police noma ulande uhlelo lokusebenza lwamaphoyisa aseDubai atholakala kuGoogle Play naku-iTunes.
Ukuhlolwa kwesimo samacala wamaphoyisa e-Abu Dhabi Online
UMnyango Wezobulungiswa ka-Abu Dhabi nawo unenkonzo yawo ekuyi-inthanethi evumela ukuthi izakhamizi zase-Abu Dhabi zibheke ukuthi ngabe umshushisi woMphakathi ucele ukuthi kufakwe izicelo yini ngabo. Ukuze usebenzise le nsiza, umenzi wesicelo kufanele afake inombolo ye-ID yase-Emirates futhi kufanele futhi afinyelele kwinamba yeselula ebhaliswe ngokumelene ne-ID yakhe ye-Emirates.
Ukuhlola ukuthi ngabe unamacala oMaphoyisa eSharjah nakwamanye ama-Emirates
Yize uhlelo lwe-inthanethi lungatholakali kwamanye ama-Emirates, ukhetho oluwusizo kakhulu ukunikeza amandla ommeli kumngane noma isihlobo esiseduze noma ukuqoka ummeli. Uma kwenzeka usuvele use-UAE, amaphoyisa azocela ukuthi uze ngokwakho. Uma ungekho ezweni, kufanele uthole i-POA (amandla ommeli) efakazelwa yinxusa lakuleli lizwe le-UAE. Umnyango Wezangaphandle Wase-UAE kufanele futhi ufakazele ukuhunyushwa kwe-Arabhu POA.
Sisengakwazi ukubheka amacala obugebengu noma ukuvinjelwa kokuhamba e-UAE ngaphandle kwe-id ye-emirates, sicela uxhumane nathi.
I-UAE Travel Ban ne-Arrest Warrant Check Service nathi
Kubalulekile ukusebenza nommeli ozokwenza isheke eliphelele mayelana ne-warrant yokuboshwa engaba khona kanye nokuvinjelwa kokuhamba okufakwe kuwe ku-UAE. Yonke imibhalo edingekayo kumele ihanjiswe futhi imiphumela yalesi sheke iyatholakala ngaphandle kwesidingo sokuhambela uqobo iziphathimandla zikahulumeni e-UAE.
Ummeli omqasayo uzokwenza isheke eliphelele neziphathimandla zikahulumeni ezihlobene ne-UAE ukunquma ukuthi ngabe kukhona yini incwadi yokubopha noma yokuvinjwa yokuhambela efakwe kini. Manje ungonga imali nesikhathi sakho ngokuhlala kude nezingozi ezingabakhona zokuboshwa noma ukwenqatshelwa ukushiya noma ukungena e-UAE phakathi nohambo lwakho noma uma kunokuvinjelwa esikhumulweni sezindiza e-UAE. Konke okudingeka ukwenze ukuhambisa amadokhumenti adingekayo ku-inthanethi futhi ezinsukwini ezimbalwa, uzokwazi ukuthola imiphumela yalesi isheke nge-imeyili kusuka kummeli.
Amadokhumenti adingekayo ekwenzeni uphenyo noma ukuhlola amacala obugebengu e-Dubai ekuvinjweni kohambo kufaka phakathi amakhophi anemibala ecacile alandelayo:
Imvume yokuhlala noma ikhasi lakamuva le-visa yokuhlala
Ipasipoti ephelelwe yisikhathi uma inesitembu se-visa yakho yokuhlala
Isitembu esisha kakhulu sokuphuma uma kukhona
I-Emirates ID uma kukhona
Ungasebenzisa le nsiza uma udinga ukuhamba, ukuya, nokubuya e-UAE futhi ufuna ukuqinisekisa ukuthi awubhalwanga ohlwini lwabasebenzi.
Yini ehlanganisiwe Ensizakalweni?
Iseluleko esijwayelekile - Uma igama lakho lifakiwe kuhlu lwabamnyama, ummeli angakunika izeluleko ezijwayelekile ngezinyathelo ezilandelayo zokubhekana nalesi simo.
Isheke eliphelele - Ummeli uzogijimisa isheke neziphathimandla zikahulumeni ezihlobene necala lokubanikeza ongaboshwa kanye nokuvinjwa kokuhamba okufakwe kuwe ku-UAE.
Inqubomgomo - Imininingwane yomuntu owabelana ngayo nazo zonke izinto oxoxa ngazo nommeli wakho izoba ngaphansi kokuvikelwa kwelungelo likammeli-leklayenti.
Umbiko we-imeyili - Uzothola imiphumela yesheke nge-imeyili kusuka kummeli wakho. Imiphumela izokhombisa uma une-waranti / ban noma cha.
Yini Okungafakiwe Enkonzweni?
Ukuphakamisa ukuvinjelwa - Ummeli ngeke abhekane nemisebenzi yokuthi igama lakho lisuswe ekuvinjelweni noma ekuphakamiseni ukuvinjelwa.
Isizathu sewaranti / ukunqatshelwa - Ummeli ngeke akuphenye noma akunikeze imininingwane ephelele mayelana nezizathu zewaranti yakho noma yokuvinjwa uma kukhona.
Amandla ommeli - Kunezikhathi lapho udinga ukunikeza uMmeli Wamandla kummeli ukwenza isheke. Uma kunjalo, ummeli uzokwazisa futhi akucebise ngokuthi kukhishwa kanjani. Lapha, udinga ukuphatha zonke izindleko ezifanele futhi kuzolungiswa ngawodwana.
Isiqinisekiso semiphumela - Kunezikhathi lapho abaphethe ngokungadaluli imininingwane ephathelene nokufakwa ohlwini lwabashoko ngenxa yezizathu zokuphepha. Umphumela wokuhlolwa kuzoncika esimweni sakho esithile futhi akunasiqiniseko sakho.
Umsebenzi owengeziwe - Imisebenzi yezomthetho engaphezulu kokwenza isheke echazwe ngenhla idinga isivumelwano esihlukile.
Ezisungulayo, Ezixazululwayo Futhi Eziyisiqalo
Xhuma kwabameli abalungile ngokushesha futhi okuyimfihlo